ATN-sanduuqyada - xeer doonayo inuu hakinayo 250 milyan oo karoon - Android TV - Android TV News
Home · Android TV · ATN-sanduuqyada - xeer doonayo inuu hakinayo 250 milyan oo karoon
ATN-sanduuqyada - xeer doonayo inuu hakinayo 250 milyan oo karoontallaabo sharciga ka dhanka ah burcad badeeda television laga shakisan yahay in Malmö sii. Xeer-ilaaliyaha ayaa haatan doonaya inuu ka hakinayo 250 milyan oo karoon hantida iyo waxa uu soo gudbiyo codsiga ah in maxkamada degmada.
Xeer Henrik Rasmusson weydiiyay galabta qabashada ah 200 million, taas oo u dhiganta magdhow ah in warbaahinada ay dhibaatadu saameysey dalbaday.
- Waxaan doonayaa in aan ka aamin xaddiga waxaan qiyaaso noqon doonaa mawduuca si cunaqabatayn sida magdhow, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Isla mar ahaantaana u baahan tahay xeer-wax-u wareegid sarrifka ah 250 million - muddada sharci ah oo loo isticmaalo marka dib ugu yeeray dakhliga in qof lahaa falal-dambiyeedyada.
ATN Labadoodu miyaanay loo baahan karo khasaaraha ugu badan iyo forfeiture dhalidda ugu badan, laakiin 250 million waa saqafka ee wadarta weyn oo sida maxkamaddu Xayiraadda laga yaabaa. Go'aamada qaaday todobaadkan.
Dhanka difaaca ayaa ku gacansaydhay
difaaca ee ay qayb ka saaqiday shuruudaha:
- Waxa uu ka mid ah wadarta guud ee lacagta badan qiimihiisa. Oo weliba, aasaas u aad u tallaabo aad shaki, ayaa sheegay in qareen Lars Engström uga hadashay.
Haddii shirkadda ka danbeeya sanduuqa ATN leedahay hantida waa cadda.
- Waxaan wax fikrad ah ee lacagta oo dhan la heli karo. Lacagta waa saqafka ah miis fadhiya, kuwaas oo isku dayi karaa in la ururiyo wax kasta oo qiime, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Tani waxay ka mid noqon kara lacagta caddaanka ah ee koontada bangiga ama hantida in la iibin karo.
- Sidoo kale waxaa jira wax la wareegeen inta lagu guda jiro weerar booliska, oo waxaa loo dhiibi doonaa in Namsmannen, ayuu yidhi Henrik Rasmussen.
Sida shirkadaha u baahan ATN uu milkiilaha lacag, tirada waa isku mid sida ee weerarka todobaad ka hor.
- Ma jiro wax isbeddel wareegi jiray xisbiga dhaawacan, ayaa sheegay in xeerilaaliyaha Henrik Rasmusson.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira calaamado muujinaya in suunka burcad badeeda TV koraan.
- Waxa jira kanaallo dheeraad ah in aan ka shakisan tahay ayaa waxaa loo qaybiyay oo aan oggolaansho, ayaa sheegay in Rasmusson.
Waraysi uu la yeeshay wakiilada Television Swedish News Skåne milkiilayaasha ATN ayaa sheegay in ugu dhakhsaha badan ay isku dayi doonaa in mar kale bilaabay daayaa TV, iyadoo la kaashanayo la-hawlgalayaasha dibadda.
Waxa uu aaminsan yahay, si kastaba ha ahaatee, xeer suurtogal ma aha jidka sharciga ah. Inkasta oo sharci ma copyright kala duwan dalalka, ma suurtowdo inuu u dhaqaaqo weeraryahanka daayaa, ugu yaraan ma in Europe.
- Waxaan u arkaa wax ay adag tahay in la qiyaaso in ay jiri doonto dalka ma halkaas oo tani ay tahay sharci, ayuu yidhi Henrik Rasmusson.
Source: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/aklagaren-begar-att-250-miljoner-fryses11.11.2016. 20:36	Categories